केसीको अवस्था थप जटिल
डडेल्धुरा २४ कात्तिक । आमरण अनसनमा रहेका डा. गोविन्द केसीको अवस्था जटिल बनेको छ । डडेलधुरा अस्पतालमा उपचाररत डा. केसीको अवस्था जटिल बन्दै गएको बताएको हो ।
उनको स्वास्थ्य बिग्रिदै गएको र अस्पतालको क्षमताभन्दा बाहिर गए जटिलता व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अस्पतालले जनाएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारको माग गर्दै प्रा. डा. केसी सात दिनदेखि डडेलधुरामा आमरण अनसनरत छन् । जिल्ला अस्पताल अगाडि एक निजी घरमा अनसन बसेका उनको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि डडेल्धुरा अस्पताल भर्ना गरिएको छ ।
डा. केसीको ब्लड प्रेसर घट्दै गएको छ भने मुटुको चाल बढेको छ । रगतमा अक्सिजनको मात्र घटेको र मृगौलामा समस्या छ । तर अस्पतालमा आईसीयू, एबीजी सेवा तथा दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेकाले समस्या भएको हो । अस्पतालले विज्ञप्ती नै जारी गर्दै यस्तो जनाएको हो ।